Qalabka wareejinta wareejinta hoggaanka oo loo cusbooneysiiyey BMW x5 g05 i8 E36 E39 FandG chassis maqaarka shaqsiyadda isbeddelka shaqsiga
Biraha wareegga wareegga qalabka 'Mankaleilab LED' waa koronto laydh dhalaalaya. Waxay u cusbooneysiisay buro ka wanaagsan. Waxay leedahay muuqaal la yaab leh oo si gaar ah loogu talagalay BMW. Intaa waxaa dheer, way fududahay in la rakibo. Nidaamkeeda korantada sare ee korantada si loo soo celiyo rakibaadda midabka asalka ah saameyn kuma yeelanayso wareegga iyo isticmaalka furaha. Iska caabinta xoqida iyo xirashada iska caabin dhalaalka dhalaalaysa ee daweynta xoqida. Tiknoolajiyada xereen ee khaaska ah waxay haysaa shaqadii gacan-qorista asalka Guudmarka Gawaarida Gawaarida: bmw Model: ...
Lagu dabaqi karo New X5 G05 X7 G07 New 3 Series G20 G28 Crystal baffle 3 Series G20 28 Qurxinta Carbon Gear Madaxa Qurxinta
Koobka wareegga qalabka 'crystal gear' Mankaleilab waa koronto garaac leh oo dhalaalaya. Waxaa loo casriyeeyay konb qurux badan oo laga helo buro caadi ah. Waxay leedahay muuqaal qurux badan oo si gaar ah loogu talagalay BMW. Intaa waxaa dheer, way fududahay in la rakibo. Nidaamkeeda korantada sare ee korantada si loo soo celiyo rakibaadda midabka asalka ah saameyn kuma yeelanayso wareegga iyo isticmaalka furaha. Iska caabinta iyo xirashada daaweynta muraayada iska caabinta dusha xoqida. Tiknoolajiyadda xereen ee khaaska ah waxay haysaa asalka asalka ah functi ...
Qalabka gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gudaha qaybo caalami ah x5 x6 cusub 3 taxane 5 taxane ah
Guudmarka Gawaarida Gawaarida: bmw Model: 1 Series, 6 Gran Turismo, X3, Z4, I8, X4, X5, 5 Series Gran Turismo, 2 Series Series: 2013-2016, 2018-2019, 2013-2017, 2013-2016, 2014 -2017, 2018-2019, 2014-2016, 2013-2016, 2012-2016, 2014-2016 Meesha uu ka soo jeedo: Zhejiang, Magaca Magaca Shiinaha: MANKALEILAB Lambarka Qaabka: Crystal Gear knob Magaca Magaca: Gawaarida Gawaarida Gawaarida Daboolka Sheyga Keywords: Shift Waxyaabaha Daboolka Gear: Midabka ABS: Nooca Gawaarida Gawaarida ah: Nooca Qaabka Guud ee Caalamiga ah: Cabbirka Qalabka Gudaha: ...
Lagu dabaqi karo gaari cusub 3 taxane f30 f31 f34 f35 shaashad cusub oo lever beddelaad leh tayo sare leh BMW
Lagu dabaqi karo gawaarida cusub ee loo yaqaan 'bmw X3, bmw f30 naqshad cusub oo lever wareeg ah oo tayo sare leh oo loogu talagalay BMW
Lagu dabaqi karo baabuur cusub 4 taxane ah f32 f33 f36 lever cusub oo lever beddelato oo leh tayo sare leh BMW
Lagu dabaqi karo baabuur cusub 2013-2020 lever wareeg birqaab cusub oo tayo sare leh oo loogu talagalay BMW
Wixii FG Crystal gawaarida gawaarida furaha furaha korontada ee furaha furaha BMW 5 taxanaha 7 taxane X3 X5
Guudmarka Gawaarida Gawaarida: bmw Model: 3 Series, 1 Series, X3, X2, X4, X1, 2 Series, BMW E39 Year: 2016-2016, 2015-2016, 2013-2016, 2015-2016, 2018-2019, 2017- 2019, 2017-2019, 2018-2019, 2018-2019, 2017-2019, 2015-2016, 2014-2016, 2015-2016, 2013- Meesha Asal ahaan: Guangdong, Magaca Magaca Shiinaha: Mankalei Lab Number Number: MKL066 Magaca wax soo saarka : Taxanaha Crystal Bilowga iyo Jooji Button Qalabka Waxyaabaha: ABS, Electroplate, Ku dayashada Crystal Color: Transparent crystal / Application Black: ...
Wixii MGU Crystal gawaarida gawaarida furaha mashiinka qalabka korontada ee furaha ee BMW 5 taxanaha 7 taxane X3 X5
Beddel aad u fiican: Naqshadeynta waxaa dhiirrigeliyay 2020 BMW X7. Caaryada waxaa loogu talagalay iyadoo loo eegayo xogta asalka ah, jeexitaanka gaariga asalka ahna waa la hayaa. Qalabka horumarsan: Qalabka ABS iyo dahaadhka chrome ayaa ka dhigaya mid u adkaysta adkaysi iyo adkeysi. Markuu iftiinka isbeddelo, dusha sare ee muraayadda wuxuu leeyahay saameyn milicsi leh. Si fudud loo rakibo: waxay qaadataa oo keliya 3 daqiiqo in la beddelo. Waxay ka kooban tahay xabag adag. Badhanka mashiinka bilowga-bilowgu wuxuu leeyahay dildilaacyo, rinjiga lagu buufiyona wuu soo baxayaa inta lagu jiro isticmaalka muddada-dheer. Farxad ...